इन्टरनेट प्रख्यात सावधान रहनुहोस् Martech Zone
इन्टरनेट प्रख्यात सावधान रहनुहोस्
शुक्रवार, सेप्टेम्बर 25, 2009 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
केही हप्ता अघि मैले मेरो बारेमा सोध्ने महिलाबाट ईमेल प्राप्त गरें ब्लगिंग र एसईओ मा पुस्तक। यो एक दु: खी ईमेल को एक बिट थियो - पढेर कि एक महिला जसले चाहन्थे मेरो ई बुक किन्न साइट मा एक टन पैसा खर्च गरेको थियो जहाँ यो कुरा गरिएको थियो र विगतमा कुनै परिणाम छैन। विडंबनाको कुरा, उनीहरूले लेखेको लेख त्यो हो जुन मैले त्यहाँ राख्नको लागि एक टन पैसा खर्च गरे।
यो इन्टर्नेट प्रसिद्ध व्यक्तिको साइटसँग धेरै प्रभावशाली संख्याहरू र विज्ञापनकर्ताहरूको अझ प्रभावशाली सूची थियो। उनीहरूले सबै वितरण स्रोतहरू बीच दैनिक readers०,००० भन्दा बढी पाठकहरूलाई दावी गरे। त्यो पुग्न एक राम्रो दर्शक हो! र श्रोताहरू मेरो उत्पादनको जुत्तामा थिए। यो सबै त्यहाँ थियो: नेत्रगोलकहरू र लक्षित दर्शकहरू। वा यो थियो?
एक महिना पछि पोष्ट भयो र मसँग छैन 200 साइटबाट आगन्तुकहरू। त्यो आगन्तुक हो… रूपान्तरण होइन ... केवल आगन्तुकहरू। दुई सय आगन्तुक मध्ये, एकल व्यक्तिले वास्तवमै e-Book खरिद गरेन। मैले आफूलाई लेखेका महिला जस्तो अवस्थामा उस्तै समस्यामा परेको थिएँ। उनले गुनासो गरिन् कि उनले धेरै पैसा खर्च गरेकी छिन् र उनलाई कहिल्यै सल्लाह दिएनन भुक्तानी प्रश्नमा रहेको वेबसाइटबाट। वेबसाइट कसैको हो इन्टर्नेट प्रसिद्ध.
अमित गुप्ताको ब्लगबाट फोटो
इन्टरनेट प्रख्यात मेरो थ्योरी
त्यसो भए, दिमागमा रहेको, र स .्ग्रहको साथ इन्टर्नेट प्रसिद्ध व्यक्तिहरू जुन म जान्दछु वा व्यापार गरेको छु, मेरो सिद्धान्त यहाँ छ:
इन्टरनेट प्रख्यात व्यक्तिहरू एक चीजमा राम्रो हुन्छन् ... आफैलाई बनाउँदै इन्टरनेट प्रख्यात.
धेरै जसो वास्तवमा ग्राहकहरूसँग काम गर्दैनन् (कसैलाई काममा लिन चाहनेहरूको बाहिर) इन्टरनेट प्रख्यात र परिणामको अपेक्षाहरू छैन)। धेरै जसो ती उपस्थिति राख्न को लागी व्यस्त छन् कि तिनीहरू व्यापक रूप मा पछ्याइन्छन् र हामी बाँकी भन्दा चलाख। ती मध्ये धेरै छिटो, बौद्धिक, बुद्धिमत्ता, र स्पष्ट को स्वामी छन्। धेरै जसोसँग पुस्तक डिल छ। ती मध्ये केही उपस्थिति राख्नको लागि संख्या बढाइचढाइ गर्न व्यस्त छन्।
उनीहरूले पत्ता लगाए कि कडा परिश्रमबाट संक्रमण र परिणामहरू केवल भएकोमा इन्टर्नेट प्रसिद्ध पैसा कमाउने सजिलो तरिका थियो। किन? किनकि हामी उनीहरूको केही रस चाहन्छौं ... हामी सवारी हिड्न चाहन्छौं ... हामी सजिलो मार्ग पनि चाहान्छौं।
यद्यपि यो सजिलो छैन। नतिजा प्राप्त हुने आशा नगर्नुहोस् जब तपाईं केही पैसा फ्याक गर्नुहुन्छ इन्टर्नेट प्रसिद्ध... केवल याद गर्नुहोस् कि तपाइँ तिनीहरूलाई प्रसिद्ध राख्न मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ। (र यो पनि ठीक छ!)
यो ब्लगको बारेमा
यसैले म यो ब्लग र ब्लगर्समा बोर्डको बारेमा यत्ति उत्साहित छु (आउन अधिकको साथ)। हामी सबै मार्केटरहरू हौं जसले हाम्रो ग्राहकहरूको सफलताको लागि प्रत्येक दिन काम गर्दछौं। ब्लग हाम्रो लगन हो, हाम्रो लाभ हैन। सायद एक दिन हामी टुक्रिएर हुनेछौं इन्टर्नेट प्रसिद्ध। यदि त्यो म हो भने, मेरो बारेमा लेख्न र मलाई उत्तरदायी समात्न नबिर्सनुहोस्!
महिलाको लागि, मैले उनलाई एक प्रति पठाएँ डमीहरूको लागि कर्पोरेट ब्लगि। नि: शुल्क र उनले पुस्तकबाट फाइदा उठाएमा मात्र भुक्तान गर्न आग्रह गरे। त्यो तपाईं कोहि को लागी जान्छ! यदि तपाईं संशयवादी हुनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई एउटा प्रतिलिपि पठाउन खुशी हुनेछु!
टैग: ब्लगिंगएसईओ को लागी ब्लगिंगकर्पोरेट ब्लगिइन्टरनेट प्रख्यात
सेप्टेम्बर 26, 2009 मा 3: 36 AM
मलाई लाग्छ यो भनाइ "सबै चमकहरू सुन होइनन्।" यो लाजमर्दो छ कि त्यहाँ बाहिर मानिसहरू छन् कि यो सुनिश्चित गर्न चाहँदैनन् कि उनीहरूको उत्पादन / सेवा सन्तोषजनक प्रदर्शन गर्दछ।
सेप्टेम्बर 28, 2009 मा 8: 27 AM
हो, कृपया मलाई २ Success चरणको प्रतिलिपि सफलता ई-बुकमा नि: शुल्क पठाउनुहोस्, र म त्यसलाई उही सर्तहरूमा लिन्छु।